China 2020 emeputa elu 90% ala jupụtara na-ehi ụra akpa na asọmpi price ụlọ ọrụ na-emepụta | Xueruisha
Ọ bụrụ na ị ka na-echegbu onwe gị banyere otu ị ga-esi ahọrọ akpa ụra n'èzí, nke a ga-abụ nhọrọ kachasị mma gị. Nke a siri ike na agba mama mama ihi ụra akpa bụ kpochapụwo mma style. Ọ na-eji njupụta nke njupụta. A na-eji nwayọọ nwayọọ belata oghere dị n’agbata ọnụ abụọ ndị dị n’elu na nke dị ala. A na-ekesa ihe ndozi ahụ dịka nha nke akụkụ ahụ, na-eme ka ihe mkpuchi zuru oke dịkwuo mma. O nwere njide ịhụnanya siri ike yana kwekọkwara na ergonomic design. Colordị isi agba dị oji dị n'èzí na-acha uhie uhie n'ime, nke na-eguzogide ọgwụ na ihe ejiji. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ndị ọzọ maka agba nke akpa ụra, anyị na-enyekwa ọrụ ịkpụzi agba. Varietydị akwa akwa dị iche iche ka ịhọrọ maka. A na-eji akwa mmiri dị n'èzí eme ihe na mmiri na-agbawa mmiri, nke dị mfe dị ọcha ma nwee ike ihicha ya na otu ehichapụ. A na-ejikwa ihe mgbochi ahụ eme ihe na mgbochi mgbochi, nke nwere ike mejupụta ndochi dị n'ime. Ihe juputara na akpa ụra a bụ nke na-acha ọcha na-acha ọcha, na-enwe oke ntụcha na njide ịhụnanya dị mma. Anyị emeela ihe dị iche iche dị iche iche iji mezuo ihe ndị dị iche iche chọrọ maka ọnọdụ okpomọkụ, ma ị na-eme atụmatụ ịga ụlọikwuu, ugwu ugwu, ịrị ugwu, ịgba ịnyịnya, ịkụ azụ ma ọ bụ njem nwere ike iji dịka ihe dị iche iche na-ejuputa ma mee ka ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche gbanwee. . Akpa ụra a na-eji ohere ọma mara mma nke ala ma na-ewe obere ohere mgbe nchekwa. Ọ gaghị ewere oke ohere n'ụlọ ma ọ bụ na akpati, na-eme ka njem gị dị mfe. Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ ahaziri iche, dịka ibipụta LOGO, usoro, nju, wdg, ma ọ bụ ịgbanwe akpa ihi ụra dịka ihe ị chọrọ. Nabatara ịkpọtụrụ na ịtụ.
Ndụmọdụ iji meziwanye ọnọdụ ikuku ụra
Họrọ udi kwesiri na etu akpa ụra gị ga-ahọrọ, họta akpa ihi ụra ka a dụkọtara ya dịka akụkụ ahụ mmadụ si aga, nke bụ ihe anyị na-akpọ udi ụra “Mummy”. Ọ nwere arụmọrụ kachasị mma, na-ebelata ikuku ikuku, iji melite njigide ọkụ, ma n'otu oge ahụ na-ebelata ibu, iji mee ka akụrụngwa dị fechaa. Na mgbakwunye, mgbe anyị na-ahọrọ akpa ụra, anyị dị ka akwa A ga-enwe nnukwu, ọkara na obere nha ịhọrọ, yabụ ị ga-ahọrọ akpa ụra gị dabere na ogo gị na ọdịdị ahụ gị. Ọ bụrụ na oghere akpa ụra buru oke ibu, anyị nwekwara ike itinye ụfọdụ uwe iji mee ka oghere ahụ pere mpe, ka e wee nweta ebumnuche nke imeziwanye ọkụ. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịhazigharị eriri na ọnụ akpa ụra iji meziwanye okpomọkụ ma ọ bụ ikpo ọkụ.
Nke gara aga: 2020 factory oyi okenye n'èzí maa ụlọikwuu ọbọgwụ / goose ala na-ehi ụra akpa wholesaler
Osote: Hot ire magburu onwe mmiri ọgwụ ọchụ windproof mummy na-ehi ụra akpa maka agha dinta
Abụọ-agba kpachie oge ufodu envelopu ihi ụra ...
2020 ọhụrụ imewe emeputa ìhè okomoko comfo ...